Taliska xoogga dalka oo ka warbixiyey weerar Al-Shabaab saakay ku qaadeen Ceel-saliini – Hornafrik Media Network
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa faah-faahin ka bixiyey dagaal culus oo saakay ka dhacay saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka Ceel-saliini, kadib markii weerar ku bilaawday qarax is-miidaamin ah ay Al-Shabaab ku qaadeen.
Saraakiishaan ayaa sheegay inay ka hor tageen weerarkaas ay saakay Al-Shabaab ku soo qaadeen, isla markaana ay ka feejignaayeen weerarrada Al-Shabaab, taasina ay u sahashay sida ay sheegeen in ay fashliliyaan weerarkaas.
“Ciidamada oo ka feejignaa weerarka Al-Shabaab ayaa ka hortegay isku daygaasi weerarka ah oo ay soo qaadeen Al-Shabaab, waxaana khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh lagu gaarsiiyay halkaas”. ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka.
Al-Shabaab ayaa dhankooda guulo ka sheegtay weerarkii ay saakay ku qaadeen saldhigga Ceel-saliini, iyagoo war ay kasoo saareen ku sheegtay in ay ciidamada dowladda uga dileen askar badan.
Sidoo kale Al-Shabaab warkooda waxa ay ku sheegeen in ay la wareegeen gacan ku heynta saldhigga oo dagaalamayaashoodu ay gudaha u galeen, sida ay sheegteen.